Malunga nathi -Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kakhulu banamava eminyaka emininzi kwicandelo leNzululwazi yezoShishino, iComputer yoHlahlelo kunye nezoBunjineli. Ukusuka kwiKomkhulu lethu laMazwe ngaMazwe eShenzhen Guangdong, sinikezela ngeNtengiso yeHlabathi kunye neNkxaso yezobuGcisa, iLebhu yoPhando noPhuhliso, iZibonelelo zoQeqesho, ukuThengisa kunye nokuGcina izindlu. Ii-Ofisi zeMimandla kunye neeArhente eziKhethekileyo nazo zichongiwe kwaye zikhethwe ukuba zinikeze uqeqesho lwasekhaya, inkxaso yezobugcisa kunye nentengiso yengingqi.
E-Sinsche, sizabalazela eyona migangatho iphezulu ngeenzame zokugqitha kulindelo lwabathengi bethu. EyethuI-ISO9001: 2015 Isiqinisekiso siqinisekisa ukuba sizibophelele kuMgangatho noKhuseleko lweeMveliso zethu, siqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahanjiswa zigqibelele, ngexesha, kunye namaxabiso okhuphiswano, kwaye ekugqibeleni, siqinisekisa ukuba asizukubethwa kwinkonzo yabathengi, uqeqesho lwemveliso kunye nokuqhubeka emva kwenkxaso yentengiso .
Umnqophiso wethu: Ukuqinisekisa umgangatho wamanzi kubantu kwihlabathi liphela.
Ukusuka kwikomkhulu lethu e-China silawula uthungelwano lwehlabathi lweentengiso, i-R & D, amaziko oPhuhliso kunye noLwakhiwo ukuyila, ukuphuhlisa nokwenza uluhlu lwezixhobo ezikumgangatho ophezulu kuhlalutyo lwamanzi.
Sinikezela ngesisombululo se-turnkey kulo lonke uhlalutyo lwakho kunye neemfuno zokubeka iliso, kwaye sisebenzisa iqela lethu elizinikeleyo leengcali siya kusebenza nawe ukuqonda iimfuno zakho, ukubonelela ngesisombululo kunye nokulandela ngenkxaso yeklasi yokuqala njengoko uyifunayo.
Uphando lwethu kunye nophando kuhlalutyo lwamanzi lukhokelele kuphuhliso lwezixhobo eziphathekayo, elebhu kunye nezixhobo ezisemgceni zovavanyo oluchanekileyo lweeparameter ezahlukeneyo ezifumaneka emanzini.
Utyalomali oluqhubekayo kubasebenzi bethu boPhando noPhuhliso kunye namaziko aqinisekisa ukuba sihlala kwindawo ephambili yetekhnoloji kwicandelo lethu.